radio Satellite.com - ​मध्य साउनमा खडेरी, किन भयो मौसममा यस्तो गडबड?
​मध्य साउनमा खडेरी, किन भयो मौसममा यस्तो गडबड?
काठमाडौं: सामन्यतया असारको मध्यतिरबाट मनसुन सुरु हुने नेपालमा हिजोआजका दिनमा लगातारजसो पानी पर्ने र आकाश वादलले ढाकिरहनुपर्ने हो। तर एक हप्तादेखि दिउँसोको समयमा चर्को घाम लागेको छ भने साँझको समयमा छिटपुट मात्र वर्षा भएको छ। साउन १ गते देशभरी ठूलो पानी परेपनि त्यसयता ठूलो पानी परेको छैन।
मनसुन सुरु भएको झण्डै डेढ महिना हुँदा पनि नेपालका मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रमा औसत वर्षाको करिब २० प्रतिशत मात्र पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। पश्चिम क्षेत्रमा भने औसत वर्षाको ७० देखि ८० प्रतिसतसम्म पानी परेको छ।
गएको अप्रिलमा विश्व मौसम संगठनको अगुवाईमा दक्षिण एसिया क्षेत्रका मौसमविद्हरुको साझा मञ्चको बंगलादेशको ढाकामा भएको छैटौं दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्चले नेपालमा सरदर भन्दा कम हुने अनुमान गरेको थियो।
यसवर्ष कम पानी पर्ने अनुमान गरेपनि यति थोरै पानी पर्ने कल्पना नगरिएको मौसमविद सुवास रिमालले बताए। 'यसवर्ष मनसुन याममा पानी कम पर्ने त हामीले अनुमान गरेकै थियौं तर अत्यन्तै कम वर्षा भयो', उनले भने 'अहिले मध्य र पूर्वी भेगका वासिन्दा कम वर्षाले आक्रान्त छन्।'
यसवर्ष विराटनगर र जनकपुरमा औसतको १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै वर्षा भएको छ भने धनकुटामा पनि २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पानी परेको छ। यसवर्ष साउन १ गते ठूलो पानी परेपनि अरु दिन सामन्य मात्र वर्षा भएको छ। मनसुनको समयमा हप्तादिन र त्यस भन्दा लामो समयको खडेरी पनि परेको छ।
वर्षा कम हुँदा आकाशेपानीको भरमा रोपाइँ हुने धेरै खेतहरु बाँझिएका छन्। अन्नभण्डार मानिएको पूर्वी तराईमा कम पानी पर्दा धेरै खेतमा अझै रोपाइ भएको छैन। सिञ्चाईको राम्रो सुविधा नभएका कारण किसानहरुले खेत रोप्ने बेलामा ठूलो पानी पर्खनुपर्छ। पहाडी क्षेत्रमा खोला तथा खोल्साहरुमा नयाँ मूल पलाएपछि मात्र रोपाइ हुन्छ।
पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय भएकै बेलामा पनि पानी पर्न नसकेको मौसमविद रिमाल बताउँछन्। काठमाडौं लगायत देशका पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रमा मंगलबार पनि बिहानैदेखि घाम लागेको छ। आज पूर्वी क्षेत्रमा सामन्य बदली भएपनि ठूलो पानी नपर्ने बिभागले जानकारी दिएको छ। दिनभरी घाम लागेपनि बिहान र साँझ थोरैथोरै पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद रिमाल बताउँछन्।
नेपालमा सामन्यतया जुन महिनाको १० तारेखदेखि सेप्टेम्बरको २३ तारेखसम्मको समयलाई सरदर मनसुनी अवधि भनिन्छ। यो समयमा वार्षिक वर्षाको ८०% वर्षा हुने गर्दछ। गएको वर्ष पनि सरदर भन्दा कम अर्थात औसतको ८७ प्रतिशत वर्षा भएको थियो।
किन भयो मौसममा गडबड?
प्रशान्त महासागरमा देखिने एलिनो (El Nino) नामको मौसमी प्रक्रियाका कारण दक्षिण एशियाली मनसुन प्रभावित भएको जल तथा मौसम विज्ञान बिभागले जनाएको छ। 'दक्षिण एसीयाली मनसुनलाई मुख्य प्रभाव पार्ने El Nino को हालको विकसित अवस्था मनसुन अवधिमा प्रवल रहने देखिएकोले अधिकांस क्षेत्रहरुमा मनसुनको स्थिति सरदर भन्दा कम हुने प्रक्षेपण गरिएको हो' बिभागको वेवसाइटमा लेखिएको छ । 'मनसुनी वायु जसरी बहनुपर्थ्यो एलिनोले त्यसरी बहन दिँदैन त्यसैले सरदरभन्दा कम वर्षा हुन्छ' मौसमविद रिमालले भने।